Penny Software Auction | Shopping Cart - RapidAuctionSoft
The newest & most modern Penny Auction Software Solution Available Ask about our 14 maalinta maxkamad free
plugins / casriyaynta
Rux shidda Solid World Class Support
Video: Penny Software Auction - RapidAuctionSoft
Penny Software Auction
Ku soo dhawow RapidAuctionSoft – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of Penny Software Auction and the Best PHP Penny Auction Script la heli karo
Weydii ku saabsan 10% guaranty qiimaha kulanka 1-603-557-1563
Waxaan hadda ay awoodaan in ay bixiyaan integrations shipper dhibic, si aad ku bixisaan hawlgal macasha dhameystiran!!!
Horeba leeyihiin website a xaraashka dinaar?
iibiye software kuu Ma tago aqlka?
Ma ku salaysan technology jir?
Ma leedahay dhiqle?
emails Ha aakhirka in spam?
Waa SEO aan shaqayn? Sow ma aha mobile saaxiibtinimo?
Waxaan dhexgalaan kartaa design iyo content galay nidaamka ka xoogbadan badan
Update New – Waxaa ka mid ah images geeska wanaagsan (kala dooran 3 Hababka iyo 8 midabada, dhammaan text firfircoon ayaa hadda afka taageeray sidoo), RSS, RSS + Atom cunaa, Sitemaps for Xaraashyada iyo content CMS iyo tiro fara badan oo isbedel kale!!!
Waxaan rajaynaynaa inaan ku hadlo aad Penny Auction Website fikrado aad la. macmiil kasta uu leeyahay fikrado iyaga u gaar ah oo aan ku raaxaysan qoraal Code Auction caadadii, waxba waa in ay adag noo. Waxaan ka heli faraxsan oo dhan of our fikradaha macaamiisha, dhab ahaantii waa qayb ka ugu fiican ee shaqo…waxaan jeclahay in aan la wadaagno in aad farax
mar walba na soo wac, Waxaan shirkadaha dibada shaqeeyaan waqtiga oo dhan
Sidaas daraaddeed aad tahay khatar ah oo ku saabsan e-commerce ama Penny Software Auction ganacsiga ah?
Waxaad ku sameeyeen si aad cilmi-baarista iyo maqlay sheekooyinka xun oo ku saabsan dhufto ee kale e-commerce, oo ka walaacsanahay ku saabsan gadashada ka il sumcad. Well waxaan leenahay dhabarkaaga. Iyada oo la casriyeeyay free guaranty A waa ugu fiican ee ganacsiga iyo muddada ugu dheer maxkamad in aan abid arko. Isku day for 14 maalmood halis free on mid ka mid ah server our…iyo marka aad diyaar u tahay ciidamo si aad server u gaar ah, ama dooro mid pof xal noo marti
Muddo kooban waxaan leenahay meel 3 websites imtixaanka beta….kuwan 3 websites in la geeyo iyo imtixaanka masuuliyad ka heli doontaa waxaa software lacag la'aan u ah nolosha…marka laga reebo design caadada ama barnaamijyada. U dir emails ku saabsan imtixaanka beta in kooxdayada u qaabilsan horumarinta
Inta badan oo casri ah
Penny Script Auction
Ma u baahan tahay Solution Penny Software Auction a, Auction Penny Script Solutions ama E-Ganacsiga Solution
Best Software Auction Penny, Auction Penny Script Solution Available
In 2018 waxaan ogaaday in dhowr alaab Software Auction Penny iyo software E-commerce ayaa isticmaalaya farsamooyin duugoobay iyo in yar haddii aan la helin qaab casri ah. Sidaas awgeed, waxaan bilaabay qoraal, waxaan ka dhulka iyo ilaa isticmaalaya CodeIgniter for our PHP qoray our code. CodeIgniter waa MVC Framework casri ah (model, view, xakamaysada), taas oo kala Sooco ka macquulka ah meesha uu u baahan yahay, waa super fudud si ay u barto oo uu horumaro, waayo,, waa ka dhaqso badan PHP caadiga ah, dheeraad ah oo lagu kalsoonaan karo oo caddeyn dheeraad ah mustaqbalka.
Laakiin in aan ahaa ku filan, waxaan sidoo kale ogaaday in sababta ugu server Software PHP kaliya Penny Auction ku fashilmaan waxaa ugu wacan inay Talo Saaro shidda Ajax, yeedhiddii iyo fariimaha. Sidaas dhaqaaqay oo dhan of this si Socket.io iyo Node.JS. Taasoo la micno ah in server Fariintii si toos ah macmiilka ku soo diri kartaa uma baahna macmiilka in si joogto ah codsan xogta cusub. shidda Our dhab ula socdaan tartanka in 1000aad ee labaad. Taasoo la micno ah in amarka waa ka dhaqso, dheeraad ah oo deggan iyo ka badan la isku halayn karo ka badan xal kale. Ha welwelin ku saabsan qof ka cabanaya oo ku saabsan luntay dalab labaad ee ugu dambeeyay. Our yeedhiddii waxaa dabagal dheeraad ah oo sax ahayn goobaha kale. Waxaad macno ahaan ku arki kartaa isbeddelka qaata sare gudahood labaad isku haddii badan isticmaala amar waqti isku mid ah.
World Design Auction Penny fasalka
Ugu dambeyntii waxaan ogaanay macaamiishooda ugu badan yihiin raaxo bixinta ay u marti qaadeen iyo dayactirka ee lacagta bil kasta fudud, on server load dheelitiri lagu kalsoon yahay, ay bixiyaan mid ka mid ah shirkadaha server ugu fiican adduunka! Sidaas awgeed, waxaan qaban wax kasta oo aad loogu talagalay. Haddii aad ka koraan server caadi ah, ka dibna waxaan oo aad u soo guurto karaa doontaa in aad server u gaar ah haddii ay waajib tahay. Laakiin weli waxaad yeelan doontaa oo dhan oo ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah version gacanta software.
Waayo, wakhtiga oo dhan ka kooban dhammaan macaamiisha cusub waxay heli rakibo free, 5 saacadood oo tababar iyo 5 saacadood oo design free.
Waxaan bixinaa wax ka badan kaliya Solutions Auction Penny
Na weydiiso ku saabsan plugin gaadhigii shopping.
Taageerada waxaa dheer luqadaha cusub
Rux shidda Solid, dabagal ku kun ee labaad ah. waxaa nidaamka tartanka ugu sax ah la heli karo Samaynta.
ISKU DAY hor inta aadan gadan. Free 2 toddobaadkii maxkamad.
Clones hadda waxaa ka mid ah
Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin 25 mawduucyada Software Auction Penny in lagu saleyn karaa dhammaan waxyaabaha our, taasoo la micno ah dabacsanaan weyn ee Design aad Software xaraashka Penny
Na weydiiso oo ku saabsan noocyada kale ee xaraashka, waxaan badan oo dheeraad ah ku samayn badan oo kaliya Penny Software Auction
Fiiri goodhiyaha our live On site demo our!!!
Auction Penny Features Software
Diiwaangelinta caadiga ah ka hor gelinayn dalab, user ah ayaa loo baahan yahay si ay u diiwaan.
Users Login biirsadaan karaa faa'iidooyinka badan oo ka mid ahaanshaha xubin – gasho bogga account ay, meel dalab, ku dar lacag ay account oo badan oo hawlaha more.
Iibsato Credit / Add Users Balance iibsan kartaa credit iyo dar dheelitirka ay account ka mid ah via albaab bixinta, bangiga, ama deebaajiga toos ah ka hor gelinayn dalab.
Tartannada Place Users dooran kartaa wax soo saarka iyo meel dalab. user The dhigi karto dalab badan inta ay jeclaan lahaa ilaa ay ku guuleystaan. Waxay sidoo kale labada dhigi karto hal dalab ama ay dalab badbaadin oo ay isticmaalaan Bidbutler si toos ah amar iyaga oo wakiil.
Bidbutler Bidbutler, sidoo kale loo yaqaan autobid ama dalab sayidkii, waa meesha nidaamka meelaha dalab aad ku badbaadi si toos ah toban ilbiriqsi kasta, ama hadba bareeg waxaad cayimi.
Tartannada SMS uma baahnid in aad iska diiwaan gelin iyo gasho dalab SMS ah. macluumaad yeedhiddii SMS waxaa lagu arki karaa xaraashka la xiriira oo lagu hagaajin karo maamulka ee goobta.
Users Live History Bid arki kartaa hawlaha yeedhiddii iyaga u gaar ah oo kale oo ka qaybta taariikhda dalab gudaha bogga faahfaahinta soo saarka.
Guulaystey guusha ee xaraashka uu yahay qof la soo dhaafay in meel dalab waqtiga marka gaadho eber ilbiriqsi. goolkii guusha ee uu bixiyo qiimaha kama dambaysta ah item xaraashka (kaas oo noqon doona ka hooseeya qiimaha dhabta ah).
Noocyada Auction Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah xaraashka ee suuqa; si kastaba ha ahaatee, noocyada ugu caansan yihiin Auction joogto ah, Go'an Auction Price, Nilbitter Auction, Auction Free iyo Auction ayaase.
CMS The nidaamka maamulka content (CMS), waa meesha aad ka abuuri karaan search engine-pages kala duwan oo saaxiibtinimo ee goobta xaraashka aad – sida nagu saabsan, Nala soo xiriir, Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, shuruudaha & xaaladaha, FAQ ee, I caawi, Sida ay u Shaqeyso iyo sidaas.
11 Account user
Xidigaha hadda List Auction – Halkan waxa aad ka arki kartaa macluumaadkaaga yeedhiddii Socda / Auction Live ee.
Won List Auction – Laga soo bilaabo halkan waxaad ka arki kartaa liiska Xaraashyada ku guuleystay iyo bixiyaan qiimaha ugu dambeeya.
Bid History Archive – Users ka arki kartaa in ay archive dalab halkan ka.
Ku dar Found (Iibsato Bid Pack) – Users ku dari kartaa dheelitirka si ay u meel dalab ka qaybtan.
Qaabka mushaar-bixinta – Users dooran kartaa habka bixinta kasta, oo dhan lagu kalsoonaan karo, oo bixiso qiimaha final xaraashka ee. PayPal waa albaab bixinta caadiga ah.
Taariikhda Bixid – Users ka arki kartaa dhammaan hawlaha macaamil ka qaybtan.
furto Code – Users furan karo dalab codes gaar ah waxaa la siiyaa by admin sida nooc ka mid ah horumarinta site.
U dir Saaxiib ah – Users gudbin karaan saaxiibo badan inta ay rabto. Waayo gudbinta kasta oo ay sidoo kale ka heli kartaa credits bonus dhigay by admin ah.
Badalida Lambarka sirta ah – Users ka beddeli kartaa password account ay halkan ka.
Account xiran – Users xirto karaan account oo iyana ma ay furi karaan account la isla cinwaanka email mar kale.
Newsletter Dejinta – Users sidoo kale awood karo ama gab doorasho xidhid warsidahan ka qaybtan.
Subscribe Visitors Newsletter isku diiwaan gelin kartaa warsidaha xaraashka si ay u helaan farriimaha ee, updates iyo dalabyo.
Maamulka Category admin The maamuli kartaa (ku dar, edit ama tirtirto) qaybaha iyo search for qaybaha labada magac ama ID.
Xaraashyada Management Admin ku dari kartaa, edit ama tirtirto Xaraashyada oo baadhaan iyaga u magac, status, nooca iyo ID. admin ayaa sidoo kale koobi karo xaraashka la mid ah iyo sidoo kale eegto waxa ee taariikhda gala iyo faahfaahinta kale.
Report Xaraashyada Admin / Dhalmada ka arki kartaa warbixinta ee xaraashka guusha ama faahfaahinta ku guuleystay. admin waxay badali karaan xaalada ilaa xaraashka ee dhalmada ka qaybtan.
Website Dejinta admin ayaa ka qaybtan kartaa goobaha site.
Maamulka Member admin ayaa sidoo kale ku dari kartaa, edit ama tirtirto dadka isticmaala ama raadiyo xaaladdooda, magacaabi iyo ID. admin ayaa sidoo kale ka arki kartaa amarka dadka isticmaala ' & taariikhda macaamil.
CMS admin ayaa ku dari kartaa, edit ama tirtirto mid ka mid ah content goobta sida Help, FAQ, Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo wixii la mid ah.
Email Dejinta admin The dooran kartaa goob email ka qaybtan – dhaqaajiso email ah, halmaamay password iwm.
Maamulka guulaystey admin The kartaa liiska guusha ay image ah, cinwaanka, iyo jawaabahooda.
Statistics Site admin The ka arki kartaa warbixinta website iyo dhoofin warbixinta qaab CSV.
Time Zone Dejinta admin ayaa ka qaybtan kartaa goob zone waqti dalka.
Maamulka Gaarka U bandhigidda / Gudbinta
Time admin The kartaa dalabyo gaar ah iyo gunooyinka si kor loogu qaado website-. codes Bonus yeelan doontaa xadka wakhti go'an.
Bonus Dejinta admin The dhigay karaan is diiwaangelinta iyo u gudbinta gunooyinka.
Bid Pack Management admin The kartaa baakad dalab oo kala duwan oo ay la socdaan credit free. admin ayaa ku dari kartaa, edit ama tirtirto kasta Bid Pack.
Help / Management FAQ Abuur pages Help iyo FAQ oo ay la socdaan sharaxaad ka.
IP Block admin The xannibi karaa IP kasta website dheeraad ah helaan.
Beddel Password admin halkan ka bedeli kartaa password account ay.
relist Auto iyo liiska auto Xaraashyada
Soo gal la Facebook ama Twitter
addons fara badan / plugins iyo muuqaalada optiona
Ku qoran qaab casri ah taasoo la micno ah waa mid deggan oo la saadaalin karo
Magacaaga (loo baahan yahay)
Your Email (loo baahan yahay)
Your Phone (loo baahan yahay)
Addoon Dropship New leeyahay taageero Doba iyo MegaGoods, dropshippers dheeraad ah in lagu daro in ka badan maalmaha soo socda. Kac oo socda la dukaan ku qasabno yar oo sahlan
Soo Bandhigida theming in our 20+ habyaalada, combos template sub…iyada oo ku dhowaad 30 mawduucyada iyo sii kordhaya…aad hadda in ka badan abuuri karaan 500+ naqshado si buuxda u gaar ah. badan oo ku salaysan fasaxa
Taageerada Language Dynamic, ha your site gaaraan dad badan
New Addoon for Xaraashyada Penny, Shopping iyo POS code…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (POS, shopping ama Xaraashyada…Xaraashyada Arbacada soo socda dhamaadka ee sanadka BTW). Addoon Tani waxay u shaqeeya wax soo saarka iyo tags Meta hadda, laakiin waxay u baahan tahay xisaab google ah API turjumaad ay. […]